Patch tsy misy tenona
Vokatra namboarina ho an'ny mpanjifa Guangzhou
Firafitra firafitra: sarimihetsika biby mangarahara, hydrogel, harato elastika, sarimihetsika perla.
Endri-javatra vokatra: Miaraka amin'ny fotony, dia afaka mahatratra ny vokatry ny anti-ketrona sy ny moisturizing.
Vokatra famaritana tsena: vokatra fianakavian'i MAGIC STRIPS. Raha ampitahaina amin'ny vokatra MAGIC STRIPS Family, ity vokatra ity dia tsara kokoa noho ny vokariny raha ampiasaina miaraka amin'ny hydrogel sy moisturizer.
● Gel hydrofilika, sosona gel matanjaka, mamelona ny hoditra mandritra ny fotoana lava, ny fehin'ny tsiky dia afaka manenjana ny hoditra ary manatsara ny elastika tsipika mitsiky.
● Mamelombelona sy mamelombelona ny hoditra, manao azy ho tanora kokoa, mampihena ny ketrona ary manamboatra hoditra.
● Ny takelaka havia sy havanana dia azo ampiasaina tsiroaroa handrakofana faritra midadasika kokoa amin'ny lafiny roa amin'ny tsipika mitsiky vava, ny tsipika marionette ary ny tsipika mipoitra manodidina ny vava sy ny molotra ambony, ho an'ny famelomana maharitra, ny fahamafisana ary ny fampiakarana ho an'ny 8 ora.
● Mampiasà tsipika mitsiky mba hanamboarana sy hanamafisana ny hoditra, ny toe-batana ary hanatsarana ny toe-piainan'ny hoditra hisorohana ny fisehoan'ny tarehy, ny fahasimban'ny masoandro na ny tsipika vaovao ateraky ny fahanterana.
Ny hevi-dehibe famolavolana an'ity vokatra ity dia ny fametrahana moisturizer amin'ny tarehy hampihenana ny fahaverezan'ny rano amin'ny hoditra, ampiarahina amin'ny patch hydrogel, mba hahatratrarana ny vokatra mamontsina sy anti-ketrona. Voalohany, mila mampiditra moisturizer molekiola kely amin'ny vala nasolabial isika, ary avy eo mametraka ny patch hydrogel antsika amin'ilay faritra mila fikojakojana. Ny ketrona aforitra nasolabial dia ketrona somary sarotra. Raha ny hevitry ny mpanjifanay dia mahomby ny fampiasana maharitra. Na dia afaka mampihena ny fahaverezan'ny rano aza ny hoditra noho ny fampiharana ny moisturizer dia mbola mila tontolo mando hamandoana ny hoditra izy io. Io fitambarana io dia mety hisy vokany tsara kokoa noho ny moisturizers mahazatra.
Ankoatr'izay, dia misy sosona harato izy io, izay afaka mitondra tanjaka tsara kokoa ho an'ny hydrogel ary mampiakatra tsara kokoa ny hoditra.
Ny Suzhou Hydrocare Tech dia miasa amin'ny fikarohana sy ny fampandrosoana, ny famokarana ary ny fanodinana OEM ny akora gel. Any amin'ny Suzhou Industrial Park no misy ilay orinasa, sahabo ho 70 kilometatra miala ny seranan-tsambon'i Shanghai. Ny orinasa dia manana atrikasa 500 metatra toradroa misy atrikasa fanadiovana haavo 100 000, trano fitahirizana 1300 metatra toradroa ary tsipika famokarana hydrogel roa. Hampiasainay ny fahalalantsika matihanina, ny traikefa manankarena ananantsika ary ny toetoetran'ny rindrambaiko sy ny fitaovana entina hamoronana vokatra avo lenta ho an'ny mpanjifa.
Teo aloha: Hydrogel microcrystalline trondro tsipika patch
Manaraka: Patch hydratel microcrystalline Hydrogel
Patetika vitamina Bariatric
Taratasy fitsaboana ho an'ny fanaintainana
Akanjo ratra amin'ny ranoka
Hatramin'ny nananganana azy tamin'ny taona 2018, Suzhou Hydrocare Tech dia nekena ho orinasa manan-kery eo amin'ny sehatry ny hydrogel any Shina.